Chamisa Takes 'Citizens Tour' To Mash West
Phidza 6 months ago
Tinashe 6 months ago
Munodya henyu bhonzo isu tine nyama
Pamamonya ipapo tinovadyira bhonzo .ngapinde hake mupfana wedu .
I stay in magunje ndezve kunyepa izvi
Haa @Gaffer, dai usingatoshandisi zvko zita iro coz iguru plus roreva zvinhu zvihombe .Ndakunyarra hsnkue buty its not your problems wakatodza zanu Pf iwee buty what l want to tell you is employment, freedom, democracy, peace zvinhu izvo zvakakosha kuvsnhu plus toda marii inesimba xaa .
Iwe gaffer kungwarira kupiwa hembe yezanu musi wauchaishaya uchabata magaro uchida kubata soro
Next election results will not be announced just like in 2008.maPfee achapfekera mumapako isu tichipembera kkk
# ngaapinde hke mu yutii wedu
You are just but an empty tin that has been eaten by termites Gaffer
U are just but an empty tin that has been eaten by termites.
Nhai iwe Gaffer,unofunga zvauri kutaura zvinotaurwa nemunhu asina irikuregerera dzimwe here apo?You are a psychiatric patient who needs an immediate attention in an intensive care unit otherwise you will expose your imbecility to the public.
Kushaikwa kwemabasa munyika,huori,kubiridzira sarudzo,kuba zvicherwa zvenyika,kusapa vashandi vehurumende muhoro unogutsa zvese izvi zvakaunzwa neopposition here?
Baba imi kumbirai njere dzenyu dzose dziite order mumusoro umo purizi.
chakonzera dambudziko hachimbofa chakave solution. Some if not many of our problems anobva ku opposition.
Kwanzi taneta nazvo ,icomment yemunhu musvinhu iyoyo nxaaa
Anenge ane upstairs yakarohwa nevirus
Chazunguza chitima cheshanduko famba Nero harahwa dzoshaiwa hope nehukasha.
Taneta nazvo izvo since 1999.Ndakatomboidawo opposition bt the story always has a sad ending.
Asi machinja murikumanikidza munhu kuti akuvhoterei?voting zanu or not z someone's democratic right that is fundamental n enshrined in our constitution.
ZANU pf ikaramba ichiita violence ,i believe ichakondzera kuti oppisition i react kovha kwaita Eswathini.They think kuti ma opposition cannot be violent here?Let us respect each other now because we dont have patience ,that's we are saying #Ngaabinde hake mukomana.Understand the voice of millions ..
Gaffer uri dambudziko saDambudzo Mnangagwa.
Uyu anorwara uyu....
Kureva iwewe ukutaura seunovhumuka.
Hapana anokugadzirisira nyika kunze kwako iwe womene.
Manje ukada Zanu pf ichakuitirei chimwe chitsva kunze kwekuuraya sezvavajaira nguva dzose.
Kana waneta nazvo saka usingadi uchida wotosapota zsnu pf hre akati urege vatonge havagoni chavo kuba chete .Nyika ino yaka shorwa nanyadenga kutiunzita nhondi inonzi zanu zvakaoma